Sweden oo 1aad ka gashay soo dhaweynta ajaanibta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sweden oo kaalin 1aad ka gashay wanaajinta dadka ajaanibta ah
Sweden oo 1aad ka gashay soo dhaweynta ajaanibta
Publicerat måndag 28 februari 2011 kl 16.38
Sweden waxaa ay kamid tahay dalalka dunida ka tirsan ee ku guuleystay iney qaxootigga siyaan wax walba oo suuragal ka dhigaya iney mutjamaca la jaan qaadaan. Daraasad ay sameysay hey’ada la yiraahdo British Council, oo ah hey’ad laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in dowladda Sweden ay kaalinta koowaad ka gashay dalalka ku yaala yruub, iyo waqooyiga Ameerika. marka laga hadlayo sida wanaagsan ee dadka soo galootiga ah loola dhaqmo.
Natiijadda daraasadan ayaa muujineysa sida dastuurka Sweden uu yahay mid shardi ka dhigaya in qaxootiga ay ku guuleystaan la jaanqaadista mujtamaca. Tan ugu wanagasan ee sharciga aad ugu da daalay ayaa ah siddii dadka ajaanibta ah ay ugu dhex muuqaan lahaayeen suuqa shaqada, ka hortaga cunsuriyada iyo siddii ay ehelada iskugu iman lahaayeen. Halka dhinacyada ay ka mid yihiin waxbarashada, ka qeyb qaadashada siyaasadda, iyo qaadashada dhalashada ay tahay arrimo faa’iido leh.
”Natiijadda koowaad ayaa muujisay natiijadda ka soo baxday markii la isku geeyey awood saameyn leh” ayuu yiri Henrik Nilsson oo ah iskuduwe ka tirsan laan qeyrta cas. Oo misna hadalkiisa sii daba dhigay sida ay sii wanaajin karaan howshooda heer gobol iyo mid caalami ah. Gaar ahaan dhanka caafimadka. Laan qeyrta cas ayaa hadaba ka qeyb qaadatay daraasadan ay si wada jir ah u sameeyey wadamada xubanaha ka ah midowga Yurub, Norway, Swetzerland. Kanada iyo Mareykanka.